Gịnị bụ ikike? | Martech Zone
Gịnị bụ ikike?
Monday, December 29, 2008 Saturday, April 30, 2016 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-eme ụfọdụ ọchụchọ nke na isi saịtị na-akpọsa Twitter Ikike arụmụka, ị ga-ahụ iyi m mere n'ọtụtụ okwu. Ọ na-akwọ m akụ na onye ọ bụla eme na-ekwu banyere ya - na mmadụ ọbụna gara wuo Ikeji na Ekwo.
Aha ka mma gaara Chọọ Tweets na Nọmba Na-agbadata site n'ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ.
Amaara m, nke ahụ bụ aha ogologo ogologo, mana nke a bụ kpọmkwem ihe ọ bụ. Ọ bụghị Njikwa.
Otu onye ma ọ bụ nzukọ nwere ike ma ọ bụ ịchịkwa n'otu ihe, ọkachasị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nhazi.
Ka mmadụ nweta Njikwa ma ọ bụ na offntanetị, ọ chọrọ ihe ole na ole:
Akwukwo ihe omuma, omuma ihe omuma nke ihe omuma ma obu ihe omumu nke uzo.
Nkwenye nke oru a site n'aka ndi ozo nwere ikike.
ndị a nhazi igwe maka Twitter enweghi abuo. Mgbe m tweeted banyere Valkyrie ụbọchị ole na ole gara aga, agara m enweta nsonaazụ ya na ụmụazụ m 3,200. Chris Pirillo si Tweet na Valkyrie bụ # 1 na nsonaazụ taa - n'ihi ụmụazụ 24,000 ya:
Ahụrụ m Chris Pirillo n'anya, mana ọ nweghị ọnya nke ikike (gbaghara Chris!) Na nyocha Valkyrie.
Ọbụna naanị ha nwere ndị na-eso ụzọ 1,872, ọ nwere ike bụrụ na ọ ga-ezi ezi karịa ikwu ya NY Times Ihe nkiri Twitter, si NY Times Movies peeji nke, nwere ikike karịrị nke m karịa, Chris ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na nsonaazụ ya. Na NY Times Twitter akaụntụ nwere obere nke ndị na-eso ụzọ.
Ekwenyere m na ohere dị na mgbasa ozi maka ikike. Ekwenyere m Google's pagerank algorithm nwere ike ịbụ mbido dị ukwuu. Ngwa Twitter nke na-enyocha retweets, recency nke tweets, ugboro ole tweets na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ (dabere na ha ikike na mmekọrịta) na mpaghara enyere aka ga - adị mma! Ọ ga-amasị m inwe ike ịchọ ndị kacha mma ịde blọgụ azụmahịa na ebe ahụ!
Ikike abụghị naanị mmadụ ole na-eso gị. Ikike bụ otu ndị mmadụ si asọpụrụ gị na mpaghara ọkachamara.
Tags: ikikechris pirillogoogle peeji nkealgọridim ibe peeji nke googlemoviesọhụrụ york ugborooge ọhụrụ yorkny ugboropeeji nkepeeji nke algorithmichiagbagọOnyinyechukwu
Okwu M Isii Resume
Dee 30, 2008 na 10: 59 AM
Doug, daalụ maka ịgbakwunye mmụọ dị mma na arụmụka a ike gwụrụ nke ọma.
Gini mere o ji were ndi nwere “ikike” pere mpe webata ezi uche n’ime mkparita uka.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere ọla ọcha, ọ nwere ike bụrụ na, n'otu oge na mgbe niile, anyị nwere ike itinye esemokwu a izu ike, agbanyeghị na onye nwere nkụda mmụọ n'ime m nwere obi abụọ na ọ ga-abụ nwute.
Akwa post. Ana m agwa ya ndị na-eso ụzọ m 2800! Anyị ga-egosi A-listers (ike ikwere na m dị nnọọ kwuru na) onye nwere ikike! 🙂
Onye edemede Scott Hepburn
Dee 30, 2008 na 11: 19 AM
Daalụ maka isonye na olu nke olu na-egosi ihe echiche dara ụda nke a bụ.
Ahụrụ m uru ọ bara inwe ike inyocha ọchụchọ site na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ, mana ịkpọ ya ikike bụ ihe nzuzu.
Ndị folks na-akwado usoro a nwere ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ mbara igwe (Loic, Scoble, Arrington, wdg). Gịnị ma ị kpọọ atụmatụ a n'ezie?